Daniel Ståhl oo kaalinta labaad galey saxan tuurka ciyaaraha fudud ee adduunka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Daniel Ståhl oo kaalinta labaad ka galey ciyaaraha fudud ee adduunka. Sawirkii : Jessica Gow/TT sawir: Jessica Gow/TT
Daniel Ståhl oo kaalinta labaad galey saxan tuurka ciyaaraha fudud ee adduunka
La daabacay måndag 7 augusti 2017 kl 14.39
Ciyaaraha fudud ee adduunka oo imminka ka socda magaalada London ee carriga England ayaa waxaa kaalinta labaad ka galey daniel Ståhl oo ah ciyaaryahan Iswiidhish ah oo ku tartama ciyaaraha saxan tuurka (diskus), wuxuuna raja weyn ka qabaa in uu bilad dhankaas ka soo hooyo.
Ciyaaryahankaan ayaa dad badani waxay qiyaasayeen in uu dalkaan Iswiidhan u soo hoyn doono bilad dahab ah balse wuxuu galey kaalinta labaad kaas oo laba centimeter oo kaliya ayuu ka hoos marey ciyaartoyga isagu biladdaas dahabka ah ku guuleystey.
Daniel Stålhl ayaa ku faraxsan in uu kaalinta labaad ka galey tartankaas, wuxuuna yiri isagoo arrinkaas ka hadlaya:
- Waxaan ahaa qofka koowaad ee ay dadka Iswiidhishku filayeen in uu ciyaarahaan fudfudud ee caalamiga ah bilad ka soo hooyo, ayuu yiri Daniel Stålhl.
Ciyaartoyda Iswiidhishka ah ee tartankaas ka qeyb qaadaneya ayaa ah kuwa badan, waxaa sidoo kale iyana la rajeynayey in Angelica Bengtsson ay bilad ciyaarahaas ka soo hooyso , balse taas badalkeeda waxay gashey kaalinta tobnaad.
Ciyaartoyda Iswiidhishka ah ayaan wali badankoodu tartankaas ka qeyb qaadan, waxayna ciyaarahaasi socon doonaan ilaa iyo 13-ka bisha agoosto ee aan ku jirno.